Ungayithola Kanjani Ababukeli Benyanga abayi-100K ku-Pinterest Kwinyanga eyodwa - iLucidPix
Ungayithola Kanjani Ababukeli Benyanga abayi-100K ku-Pinterest Kwinyanga eyodwa
Pinterest kuyindawo eku-inthanethi ngenhloso yokwabelana ngokuqukethwe, ukusebenzisana nabanye abasebenzisi bokudala, futhi kusebenza futhi njengomthombo wokuphefumlelwa. Sisanda kujoyina i-Pinterest ngasekupheleni kuka-Ephreli njengendlela yokwandisa abasebenzisi bethu futhi sakhe ukuqwashisa ngomkhiqizo, nokuthola ugqozi lwe-Izithombe zethu ze-3D (ungabheka i-akhawunti yethu lapha). Ngemuva kwenyanga eyodwa endaweni yesikhulumi, sikhule kusuka kubabukeli bezinyanga zonke abangama-7,000 safinyelela kwabangaphezulu kuka-100,000 ngaphandle kokunyuswa okukhokhelwayo. Kulesi sikhala se-blog, sizokunikeza izeluleko zokuthi ungazithola kanjani izibukeli zanyanga zonke ezingama-100k ePinterest ngenyanga eyodwa.
Dala okuqukethwe koqobo kuPinterest
Enye yezingcezu ezinkulu zezeluleko zokukhulisa ababukeli bakho be-Pinterest ngokomzimba ukudala okuqukethwe koqobo. Njengoba ipulatifomu ivumela abasebenzisi ukuthi baphinde babelane kalula ngezikhonkwane, okuqukethwe okukhiqizwe kwesinye isikhathi kungaphinde kube okuphindayo. I-Pinterest algorithm isekela ikhasi lakho lasekhaya kwizikhonkwane ozigcinile ngakho-ke kuvame kakhulu ukuba nokuthunyelwe okufanayo kokuphakelayo kwakho. Ngokwakha okuqukethwe koqobo, uzobe unikezela ngokuhlukile futhi akukaze kubonwe kubasebenzisi bePinterest. Lokhu kubalulekile kakhulu ukuthi sikhule kanjani ikhasi leLucidPix kubabukeli bezinyanga ezingaphezu kuka-100,000, njengoba Okwamanje Izithombe ze-3D zihlukile ku-akhawunti yethu. Bheka isibonelo esingezansi.
Chofoza lapha ukubuka le Phini!
Hlela i-Pinterest yakho
Ngokuhlelela i-akhawunti yakho ye-Pinterest ngokuhlelekile, ungakwenza kube lula kakhulu ngabasebenzisi ukuzulazula. Isibonelo, dala amabhodi ahlukene wezikhonkwane zakho bese uwafaka ngezihloko ngendlela esobala ukuze abasebenzisi bakwazi ukukhomba ngaphakathi kwemizuzwana embalwa ukuthi ithini ingqikithi yebhodi ngalinye. Eceleni kwalokhu, ukuhlela i-Pinterest yakho kungenza ukubuka kuyithokozise kakhulu ababukeli. Lokhu kubalulekile njengoba kukhombisa uhlobo lwe-akhawunti ye-Pinterest onayo futhi isiza ekuqotheni ababukeli abanokuqukethwe.
Yenza Izikhonkwane Zakho Zivelele Ukusiza Ukufinyelela 100k
Into yokuqala yokuqala ebonwa ngababukeli ngaphambi kokufaka i-akhawunti yakho yePinterest, izembozo zePin. Kubalulekile ukuba nalaba abasukume ukuheha abanye ngokuzibandakanya nabo ngokuchofoza izikhonkwane zokusondela noma ngokuchofoza izixhumanisi. Okokuthunyelwe kwethu kwebhulogi, sidale ubuciko eklanywe ngokuhlukile ngezinsizakalo ezahlukahlukene ezifana Vula futhi Canva. Lezi zinethempulethi lapho abasebenzisi bangenza ngezifiso futhi bazame ngokubukeka okuhlukile, abalungele ukwenza into eyingqayizivele nophawu. Lokhu kungenye into ebalulekile okufanele uyicabangele lapho uzama ukukhulisa ababukeli bakho benyanga ukuya ku-100k.
Hlangana Nabanye Abasebenzisi bePinterest
I-Pinterest ivumela abasebenzisi ukuthi bahlanganyele nabanye ngezindlela ezahlukahlukene. Abasebenzisi bazibandakanya namanye ama-akhawunti ngokumane bacofe izikhonkwane zabo noma bazilondoloze kumabhodi abo esiza ekwakheni ukuqashelwa kwe-akhawunti. Ngaphezu kwalokho, i-Pinterest inikezela ngamabhodi asebenzayo nabasebenzisi abaningi okuvumela abantu ukuthi basebenze ngokubambisana ekwakheni ibhodi enezihloko - le yindlela enhle yokuthola i-akhawunti yakho yePinterest laphaya!
I-3D Photo App Yakha Ukuxhumana Ngesikhathi Sokuhlukaniswa →← Ungayisebenzisa Kanjani Ikhodi Yakho Yokukhuthaza yeLucidPix ye-iPhone ne-Android